Ugandha oo si elektaroonig ah u nidaamisa Ganacsiga Duurjoogta, Ilaalineysa Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Ugandha oo si elektaroonig ah u nidaamisa Ganacsiga Duurjoogta, Ilaalineysa Dalxiiska
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Ugandha Oo Xukumaya Ganacsiga Duurjoogta
Wasaaradda Dalxiiska, Duurjoogta iyo Qadiimiga Uganda ayaa maanta, July 29, 2021, soo saartay nidaamkii ugu horreeyay ee oggolaanshaha elektaroonigga ah oo lagu nidaaminayo ganacsiga duurjoogta iyo sidoo kale wax soo saarka duurjoogta ee dalka.
Mawduuca “Xoojinta Xeerka Ganacsiga Duurjoogta Waarta,” nidaamka oggolaanshaha elektaroonigga ah wuxuu ujeedkiisu yahay in la xakameeyo ganacsiga sharciga ah ee duurjoogta iyo ka -hortagga ganacsiga muunadda sharci -darrada ah.
Tan waxaa lagu dhammeystiraa ruqsadaha elektaroonigga ah iyo ruqsadaha ganacsiga (soo dejinta, dhoofinta, iyo dib-u-dhoofinta) muunadaha.
Muunadahaan waxay ku qoran yihiin Heshiiska Ganacsiga Caalamiga ah ee Noolaha Dhimanaya ee Dhirta iyo Dhirta Duurjoogta ah (CITES).
Ugandha ayaa hadda noqotay waddankii ugu horreeyay ee Bariga Afrika iyo kan 8aad ee qaaradda Afrika si loo horumariyo nidaamka oggolaanshaha CITES elektarooniga ah.
Horumarinta nidaamka oggolaanshaha elektiroonigga ah waxaa maalgeliyay dadka Mareykanka ee hoos yimaada Barnaamijka Horumarinta Caalamiga ah ee Mareykanka (USAID)/Uganda La -dagaallanka Dambiyada Duur -joogta (CWC) iyada oo loo marayo Ururka Ilaalinta Duurjoogta (WCS) oo kaashaneysa Wasaaradda Dalxiiska, Duurjoogta iyo Qadiimiga.
Daahfurka waxaa dhexdhexaadinayey Dr. Bariirega Akankwasah, PhD, Guddoomiyaha Ilaalinta Duurjoogta iyo Ku -simaha Agaasimaha Wasaaradda Dalxiiska Duurjoogta iyo Qadiimiga (MTWA), oo ah qaab isku jira iyo qaab muuqaal ah. Waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Dalxiiska Duurjoogta iyo Qadiimiga, Mudane Tom Butime, oo hormuud ka ahaa daahfurka; Xoghayihiisa Joogtada ah, Doreen Katusiime; Danjiraha Mareykanka ee Uganda, Danjire Natalie E. Brown; ahna Madaxa Ergada Yurub gudaha Ugandha, Danjire Attilio Pacifici. Haruko Okusu, Madaxa Mashruuca, wuxuu awooday inuu matalo Xoghaynta CITES.
Danjire Brown oo ka hadlay munaasabadda, ayaa iftiimiyay mashaariicda ay ka taageereyso USAID si loola dagaallamo ka ganacsiga duurjoogta sharci -darrada ah oo ay ka mid tahay Unugga Canine ee kaydka duurjoogta ee Karuma, halkaas oo eyda lagu tababaro loona qalabeeyo si ay u dhexgalaan badeecadaha duur -joogta ee gobolka.
Danjire Pacifici wuxuu cambaareeyay burburinta kaynta oo ay ku jirto Bugoma sonkorta ganacsiga ee Hoima Sugar Limited iyo Zoka Forest ay u qodayaan geedaha ay wafdiga Midowga Yurub booqdeen bishii Nofembar 2020 ayna ku diiwaangeliyeen burburka sawirrada dayax -gacmeedka. Kaymaha Bugoma waa deegaan ay ku nool yihiin Mangabey Ugandha oo aad u liidata, iyo Kaymaha Zoka ayaa ah meel ay ku noolyihiin Dabagaalaha duulaya. Labada kaydiba waxay udub dhexaad u ahaayeen ololeyaal joogto ah oo ka dhan ah kaadhadhka dadka dhulka qabsada iyo waxyaabaha musuqmaasuqa ee xafiisyada sare.
Haruko Okusu, Xoghaynta CITES, ayaa xustay “… Oggolaanshuhu waa mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee lagula socdo ganacsiga noocyada CITES-ku taxan oo muhiim u ah fahamka baaxadda ganacsiga CITES. Nidaamka Uganda wuxuu doonayaa inuu sugo tallaabo kasta oo silsiladda haynta ah. ”
Dr. Bariirega wuxuu ka bixiyay taariikh CITES iyo saxiixii xigay ee Uganda oo ay ku jirto fasiraadda Lifaaqa I, II, iyo III ee liiska Liiska Heshiiska ee noocyada la siiyay heerar kala duwan ama noocyada kahortagga xad-dhaafka ah.
Wuxuu yiri, iyada oo ah Maamulka Maareynta CITES, Wasaaradda Dalxiiska, Duurjoogta iyo Qadiimiga Uganda waxaa loo xilsaaray inay hubiso in ka ganacsiga liistada CITES iyo noocyada kale ee duurjoogta ay tahay mid waarta oo sharci ah. Tan waxaa lagu sameeyaa habab kale iyada oo loo marayo bixinta rukhsadaha CITES marka ay soo jeediso Maamulka Duurjoogta Uganda ee duurjoogta; Wasaaradda Beeraha, Warshadaha Xoolaha iyo Kalluumaysiga kalluunka qurxinta; iyo Wasaaradda Biyaha iyo Deegaanka ee dhirta asal ahaan duurjoogta ah. Waa mas'uuliyiinta sayniska ee CITES inay mas'uul ka yihiin inay hubiyaan in ganacsiga, gaar ahaan noocyada xayawaanka ama dhirta, aysan waxyeello u lahayn badbaadadooda noocyada duurjoogta ah.
Illaa iyo hadda, Uganda sida dalal kale oo badan ayaa adeegsaneysay nidaam ku saleysan warqad oo shahaado bixin iyo oggolaansho siinta, taas oo u nuglaan karta been abuurka, waxay qaadataa waqti dheeri ah si loo socodsiiyo loona xaqiijiyo, iyo imaanshaha COVID-19, dhaqdhaqaaqa dukumiintiyada halis u ah gudbinta cudurrada. Iyada oo la adeegsanayo nidaamka elektiroonigga ah, dhibcaha kala duwan ee CITES iyo hay'adaha fulinta sharciga ayaa isla markiiba xaqiijin kara oggolaanshaha waxayna wadaagi karaan macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee ganacsiga duurjoogta. Tani waxay ka hortagi doontaa ka ganacsiga duurjoogta sharci -darrada ah oo khatar ku ah dadka qaar ka mid ah noocyada duurjoogta ah ee ugu caansan sida maroodiga, taas oo wiiqaysa dakhliga dalxiiska Uganda iyo amniga qaranka.
Joward Baluku, Sarkaalka Duurjoogta ee Wasaaradda Dalxiiska, Duurjoogta iyo Waxyaabaha Qadiimiga ah, ayaa ku tusay nidaamka khadka tooska ah ee muujinaya sida qofku u fudud yahay gal aqoonsigooda iyagoo adeegsanaya isku xirka websaydhka Duurjoogta Duurjoogta iyo Qadiimiga kaas oo codsadaha ku qaada habka diiwaangelinta ka hor intaan la ansixin oo aan la xaqiijin.
Wakaaladda Horumarinta Caalamiga ah ee Mareykanka (USAID)/Uganda ee La-dagaallanka Dambiyada Duur-joogta (CWC) waa hawl 5-sano ah (May 13, 2020-May 12, 2025) oo ay hirgelisay Ururka Ilaalinta Duurjoogta (WCS) oo ay weheliyaan bahwadaag oo ay ku jiraan Ururka Duurjoogta Afrika (AWF), Shabakadda Ilaalinta Khayraadka Dabiiciga ah (NRCN), iyo Machadka Adeegyada Royal United (RUSI). Ujeeddada hawshu waa in la yareeyo dambiyada duurjoogta ee Uganda iyadoo la xoojinayo awoodda daneeyayaasha CWC si loo ogaado, looga hortago, loona maxkamadeeyo dambiyada duurjoogta iyada oo lala kaashanayo hay'adaha amniga iyo sharci fulinta, USAID fulinaysa la -hawlgalayaasha, shirkadaha gaarka loo leeyahay, iyo bulshooyinka ku nool agagaarka meelaha la ilaaliyo.
Heshiiska Ganacsiga Caalamiga ah ee Noocyada Khatarta ku ah Xayawaanka Dhirta iyo Dhirta (CITES) ayaa la saxiixay 3 -dii Maarso, 1973, wuxuuna dhaqan galay 1 -dii Luulyo, 1975. Shirku wuxuu ku saleeyay ganacsiga caalamiga ah ee noocyada noocyada la soo xulay si loo oggolaado iyada oo loo marayo nidaamka ruqsadda. . Uganda, oo qayb ka ah shirweynaha tan iyo Oktoobar 16, 1991, ayaa u magacowday Wasaaradda Dalxiiska, Duurjoogta iyo Qadiimiga inay tahay Maamulka Maareynta CITES si ay u maamusho nidaamka ruqsadda iyo isku dubaridka hirgelinta CITES ee Uganda. Uganda ayaa sidoo kale u magacowday Hay'adda Duurjoogta Uganda; Wasaaradda Biyaha iyo Deegaanka; iyo Wasaaradda Beeraha, Warshadaha Xoolaha iyo Kalluumaysiga inay noqdaan CITES Mas'uuliyiinta Sayniska ee duurjoogta, dhirta duurjoogta ah, iyo kalluunka qurxinta siday u kala horreeyaan si ay u bixiyaan talooyin cilmiyeed oo ku saabsan saamaynta ganacsigu ku leeyahay ilaalinta noocyada duurjoogta ah.